Akshay Kumar oo adduunka hortiisa lugaha ku qabsaday Amitabh Bachchan si uu ixtiraam ugu muujiyo & Big B oo ka hadlay! – Filimside.net
Taariikhda: November 29, 2017
Amitabh Bachchan, Akshay Kumar iyo Salman Khan waxay ka mid ahaayeen xiddigaha caanka ah ee Bollywood Town kuwaasoo joogay xafladdii International Film Festival of India 2017 illaa waqtigii gabagabada.
Akshay Kumar ayaana si aan caadi aheyn u ammaanay Amitabh Bachchan intii ay xafladdaani socotay, xitaa wuxuu ku tilmaamay Big B inuu yahay nin yar oo careysan (Angry young man).
Balse xaqiiqadu waxay tahay Akki ayaa ixtiraam sarre u muujiyey halyeeyga Bollywood Amitabh markii ugu horreysay ee ay isgacan qaadeen, wuxuuna qabsaday lugaha sida ay tahay caadada India ee dhigeysa in dadka sharafta leh laga hibeysto.
Akshay ayaa sawirkaas soo dhigay bartiisa Twitter wuxuuna kusoo qoray: “Mareykanku waxay heystaan Batman, Spider-Man iyo Superman. Laakiin India waxay heysataa superhero-geyga wiilkeenna yar ee careysan mudane Bachchan – Wuuna u qalmay abaalmarinta Indian Personality of the Year ee IFFI 2017”.
Balse Big B ayaa dib ula wadaagay macaamiishiisa Twitter sawirkaas uu soo dhigay Akshay Kumar isagoo lugaha ka qabsanaya, wuxuuna kusoo qoray: “Akshay waad iga xishoodsiisay markii aad sidaan sameysay. Ma aheyn Akshay inaad sidaan sameyso”.
Akshay oo uu Amitabh Bachchan aabe ugu matalay dhowr filim ayaa wuxuu ku tilmaamay Amitabh Bachchan aabaha dhabta ah ee fanka India.
Waxaa Aqrisay 2,046